31 Askari Oo katirsan DF oo lagu dilay Weerar ka dhacay Lafoole. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
31 Askari Oo katirsan DF oo lagu dilay Weerar ka dhacay Lafoole.
Last updated Feb 19, 2020 886 2
Ciidamo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar kamiin ah oo culus u dhigay askar katirsan kuwa dowladda federaalka, kuwaas oo kasoo baxay Muqdisho kuna sii jeeday deegaanka Ceel Saliini.
Kamiinka oo ahaa mid aad u culus iskuna bedelay dagaal toos ah ayaa waxay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ku adeegsadeen qaraxyo culus oo lala helay gawaarida dagaalka ee dowladda federaalka.
Ugu yaraan 31 askari oo katirsan ciidamada dowladda ayaa la xaqiijiyay geeridooda, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan saraakiil sar sare oo uu kamid yahay taliyihii guutada lixaad ee ciidamada dowladda federaalka.
Ugu yaraan labo gaari oo Cabdi bilayaal ah ayaa la xaqiijiyay iney ku gubteen weerarka ka dhacay Lafoole, waxaana askartan ay kusii jeedeen oo ay gurmad u ahaayeen ciidamadii dowladda ee maanta lagu xasuuqey deegaanka Ceel Saliini.
Tani waxay dhimashada guud ee ciidamada dowladda federaalka maanta oo keliya laga dilay ka dhigeysaa 72 askari, waana dharbaaxsho kulul oo gaartay ciidamada dowladda federaalka.
Maalin walba rabow yaa maqla murtad xasuuqiisa
Maraykaan rabow yaa dilyo maafiyada qooq day
Mocooyaha rabow yaa jariyo muruqa uu buuri
Muslim iyo kufraa lay sudili meel kastoy tahaye
Mooryaanta iyo gaaladiyo magac jihaad diidan
Rabow yaan midqura abid kabixin murama shaydaanle
almujahid says 2 years ago
alxamdulilaah alla ayaa mahadle
ee jabiyay cadawgiisa